यस्ता दुई एप जुन तपाईंले मोबाइलमा राख्नै हुँदैन... —
७ मंसिर २०७७, आईतवार १३:२४ admin	0 Comments
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय स्मार्टफोनको प्रयोग निकै बढेको छ । एउटा स्मार्टफोनमा हाम्रो दैनिक जीवनमा आवश्यक अनेकौं सुविधाहरु छन् । यसले अनेक कामहरु गर्न सहज हुन्छ । तर, विभिन्न टास्कहरु गर्न मोबाइलमा नयाँ नयाँ एप बनेका हुन्छन् जुन आइफोनमा एप स्टोरबाट डाउनलोड गरिन्छ भने एन्ड्रोइड फोनमा प्ले स्टोरबाट । तर, धेरै जसो मानिसहरुले आफ्नो मोबाइलमा चाहिने भन्दा अनावश्यक एपहरु पनि राखिरहेको हुन्छन् जसले हाम्रो मोबाइललाई राम्रोसँग पर्फम गर्न दिँदैन । त्यस्तै केही एप जुन हामीलाई हाम्रो फोनमा चाहिँदैन वा हामीले फोनमा राख्नै हुँदैन ।
क्यासपस्र्की, अवास्ट, एभिजीलगायतका विभिन्न एन्टी भाइरस एपहरु हाम्रो मोबाइलमा हुन सक्छन् । यस्ता एपहरुले हाम्रो मोबाइल फोनलाई सुरक्षित राख्ने दाबी गरेका हुन्छन् । तर, वास्तविकता के हो भने हाम्रो मोबाइल फोनहरुको फिचर्सका लागि चाहिने एन्टी भाइरस प्रोटेक्सन पहिले नै गुगल प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा भइसकेको हुन्छ । त्यसैले यस्ता एन्टि भाइरस एपहरु हामीलाई त्यति बेला मात्र चाहिन्छ जतिबेला हामी हाम्रो मोबाइलमा सुरक्षित साइटहरुभन्दा बाहिरबाट केही डाउनलोड गरिरहेका हुन्छौँ । अन्यथा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरबाट एप डाउनलोड गरेर चलाउन यस्ता एपको आवश्यकता नै पर्दैन ।
← नोकियाले ल्यायो ट्रिपल क्यामरा सहित नयाँ मोडल ३.४, यस्ता छन् विशेषताहरू
भोलि मङ्सिर ८ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाइको दिन? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल! →
१ पुष २०७६, मंगलवार ०८:५६ admin	0
१ पुष २०७६, मंगलवार ०७:४८ admin	0